Tsy aretina ny fitsaharan'ny fadim-bolana eo amin'ny vehivavy fa dingam-piainana, ka misy ireo zavatra tsy maintsy fantarina momba azy. 80% ny vehivavy no mandalo tsy manana olana io vanim-potoana io. Misy zavatra mety hiova eo amin'ny vehivavy. Anisan'izany ny volo mihamanify, ny hoditra tsy malefaka intsony fa mivoraka amin'ny faritra sasany, ny fihenan'ny fisian'ny hely ao anatin'ny vehivavy, ny taolana mihapoakaty indrindra raha tsy ampy "calcium", "magnésium", "potassium", "fer", tany aloha.
Fanomanana ny tanora amin'ny fanambadiana. Fampahatsiahivana ireo antanan-tohatra mankamin'ny fahamatorana. Fampitana ny fomba fiorenan'ny fitiavana eo amin'ny lehilahy sy vehivavy. Fampahafantarana ireo singa mamelona ny faharetan'ny fitiavan'ny mpivady.
Pejy 1 amin'ny 18